Top 7 Game Ma Sói Online PC, Điện Thoại Hay Nhất | Muasalebang - Muasalebang
Top 7 Game Ma Sói Online PC, Điện Thoại Hay Nhất | Muasalebang
Đang Đọc: Top 7 Game Ma Sói Online PC, Điện Thoại Hay Nhất | Muasalebang in Muasalebang
Sekuyisikhathi eside i-Werewolf ingomunye wemidlalo yebhodi edumile emhlabeni, ethandwa abantu abasha. Lo mdlalo manje usuthuthukiswe ku-PC noma ezisekelweni zomdlalo we-inthanethi wefoni. Ngakho-ke, ungahamba nabangani bakho ukuze nizizwele umdlalo we-inthanethi we-Werewolf PC khona kanye ekhaya. Ikakhulukazi esimweni somqedazwe wamanje oyinkimbinkimbi, ukudlala imidlalo ekhaya kuyinketho enhle yokuzijabulisa. Ake sifunde ukuthi ungayidlala kanjani i-waswolf online ku-PC esihlokweni esilandelayo!
1 Uyini umdlalo we-waswolf?
2 Imisebenzi namandla abalingiswa emdlalweni we-Werewolf
3 Izinzuzo zokudlala i-Werewolf online ku-PC, ifoni
4 TOP best game werewolf online PC play ekhaya
4.1 1. Dlala Amakhadi e-Viet Hoa Vampire
4.2 2. Dlala i-Ma Wolf online emphakathini – iqembu elithi Ma Wolf ku-Facebook
4.3 3. Dlala kuhlelo lokusebenza i-Wolvesville – Werewolf (Mahhala – CH Play kanye ne-App Store)
4.4 4. Uhlelo lokusebenza lwe-Werewolf Voice – I-Werewolf Online (Mahhala – CH Dlala)
4.5 5. Uhlelo lokusebenza lokudlala i-Werewolf online – I-Werewolf (Mahhala – CH Dlala)
4.6 6. I-Werewolf Voice – I-Ultimate Werewolf Party (Yamahhala)
4.7 7. Umdlalo we-PC we-Werewolf ku-inthanethi – Agrou (Mahhala)
5 Imibuzo evame ukubuzwa lapho udlala ama-waswolves online
5.1 Ingabe zikhona izinhlelo zokusebenza, izinhlelo zokusebenza zokudlala ama-waswolves online ocingweni lwakho ekhaya?
5.2 I-Werewolf imidlalo eku-inthanethi ku-PC, iyiphi ikhompyutha enhle?
Uyini umdlalo we-waswolf?
Umdlalo we-Werewolves ekuqaleni wawuyi-a umdlalo webhodi edumile phakathi kwentsha, manje isithuthukisiwe yaba inguqulo ye- werewolf eku-inthanethi ezisekelweni eziningi ze-Android ne-iOS. Ngakho ungadlala amakhadi I-Werewolf PC eku-inthanethi kanye nefoni kalula.
Idlalwa kanjani i-waswolf game online I-PC kuhle ucingo Imithetho yomdlalo iphinde isetshenziswe kanye nezindima zabadlali ezifanayo ncamashi empilweni yangempela. Abadlali banikezwa izindima ngokungahleliwe futhi ngeke wazi ukuthi ubani umngane, ubani oyisitha.
Imisebenzi namandla abalingiswa emdlalweni we-Werewolf
Ngokuyisisekelo, umsebenzi womlingiswa emdlalweni werewolf online PC ihlukaniswe yaba izingxenye ezimbili: abavamile kanye werewolves.
Iqembu labantu: Kunomsebenzi wokuqoka izimpisi futhi zilengise. Leli qembu lihlanganisa izindima zabalingiswa ezilandelayo:
Sakhamuzi: Umlingiswa ulala ebusuku futhi avuke emini. Banomsebenzi wokuxoxa ndawonye ukuze bathole impisi ecashile.
Isiprofetho: Lo muntu uzosebenza ebusuku futhi aqagele ukuthi ubani impisi ngokukhomba abanye abadlali. Uma umongameli evuma ngekhanda kulungile futhi anikine ikhanda futhi akulungile. Ngaphezu kwalokho, umprofethi uzophinde anikeze izingxabano ukuze abantu abavamile bacabange ukuthi ubani oyimpisi.
Vikela: Inomsebenzi wokulondoloza umdlali ongu-1 kodwa ayikwazi ukulondoloza umuntu ongu-1 ngokulandelana ngamajika angu-2.
Hunter: Khetha noma ubani ozodubula. Uma umzingeli ebulawa impisi, umdlali umzingeli owabelwe ngaphambili naye uzofa.
Mthakathi: ubuye wafona ebusuku. Umuntu odlala lo mlingiswa unezithako ezi-2: ikhambi eli-1 lokusindisa abantu kanye nelokubulala abantu. Umphathi usezokhombisa umuntu olunywe yimpisi, uma umthakathi esebenzisa umuthi wokuhlenga, lowo muntu uzoqhubeka ephila.
Umdala: Unezimpilo ezi-2 lapho elunywe impisi. Kodwa-ke uma uMdala elengiswa, edutshulwa umzingeli, noma ebulawa umthakathi, usazofa ujuqu. Futhi lapho umdala wendawo efa, zonke izindima ezikhethekile ngaphandle komzingeli ziyalahleka.
Intombazanyana encane: Inelungelo lokuvula amehlo ayo ukuze ibone ukuthi ubani impisi. Kodwa kufanele ihlakaniphe ngoba uma impisi ithola lokho, izobulawa yimpisi.
Thanda uNkulunkulu: Inomsebenzi wokwabela abantu ababili ukuba babe izithandani.
Iqembu le-Werewolf: Ama-Werewolves azodla abantu ubusuku bonke ukuze alondoloze izimpilo zabo.
Impisi Ejwayelekile: Kunamakhadi ama-4 e-Normal Wolf. Uma ukhetha leli khadi, umdlali unomsebenzi wokubulala isakhamuzi, noma ukukhetha ukungalumi muntu, noma ukubulalana.
Iwundlu Lempisi: Uma kwenzeka ithole lempisi lifa, ngobusuku obulandelayo, impisi izokwazi ukuluma abantu ababili ngokuqhubekayo.
Izinzuzo zokudlala i-Werewolf online ku-PC, ifoni
Ifomu legeyimu werewolf online PC, Ifoni inikeza izinzuzo eziningi ezivelele njenge:
Abadlali bangahlanganisa abangani ukuze badlale ama-waswolves ku-inthanethi
Dlala umdlalo we-werewolf eku-inthanethi nabadlali abavela eziqondisweni ezi-4
Abadlali banelungelo lokudala abalingiswa babo futhi bahlele ama-avatar abo.
I-PC yomdlalo we-waswolf eku-inthanethi nayo inomnikazi wesistimu yezinto ezihlukile nentsha, inani elilinganiselwe nezici eziningi ezikhangayo.
Uma ubamba iqhaza kulo mdlalo, ungaphinda ubambe iqhaza emqhudelwaneni wezinga ohlelwa uhlelo
Amanye amathuba afana nokujoyina umphakathi we-Discord, ukuba nezinto eziwusizo,…
>>> Bona okuningi: PC imidlalo online
TOP best game werewolf online PC play ekhaya
Imidlalo werewolf online PC, Ifoni isiza abadlali ukuthi bafinyelele kalula emhlabeni wegeyimu, ihlinzeka ngokuzijabulisa okujabulisayo nabangani. Njengamanje, kunemidlalo embalwa yamakhadi we-waswolf aku-inthanethi abantu abangakhetha kuyo. Ngokuya ngokuncamelayo, ungakhetha inguqulo efanele. Nazi izinguqulo Impisi Indoda odumile:
1. Dlala Amakhadi e-Viet Hoa Vampire
Ungakwazi ukujoyina iqembu labangane abaseduze ukuze wakhe iqembu le-Facebook noma u-lo ukuze udlale amakhadi ekhaya. Le nguqulo inokuthuthuka okuncane emithethweni yomdlalo, iba yinhle kakhulu futhi ijabulisa kakhulu. Ngakho-ke, uMa So Viet Hoa udonse ukunakwa okuningi kanye nothando lwabantu abasha. Inguqulo evamile yomdlalo we-waswolf ingaba yinkimbinkimbi kulabo abasanda kuqala. Abadlali bamageyimu baphatheke kabi ngoba kungazelelwe “balahlekelwa izimpilo zabo” ngaphandle kokuqonda ngokugcwele imisebenzi yomdlalo.
Khonamanjalo, uMa Soi Viet Hoa usadlala ngendlela endala, kodwa ushintsha imithetho yomdlalo. Isikhathi sobusuku obu-1 kuphela futhi impisi ayikwazi ukubulala wonke umuntu. Ngaphezu kwalokho, le nguqulo ye-waswolf ayinakho ukushoda kokuzijabulisa, ifanele iminyaka eminingi namaqembu amancane kusukela kubantu abangu-3 kuya kwabayi-10. Ngaphandle kwalokho, elinye iphuzu elibalulekile ukuthi abalingiswa benguqulo ye-Vietnameseized Werewolf bayachazelwa ngemisebenzi. Ungayibuka futhi uyifunde ekupheleni kwekhadi.
2. Dlala i-Ma Wolf online emphakathini – iqembu elithi Ma Wolf ku-Facebook
Enye indlela yokudlala imidlalo ye-waswolf ku-inthanethi ku-PC iwukuzwa ukudlala izinhlelo zokusebenza ku-Facebook. Le nguqulo iletha imizwa eminingi emisha nejabulisayo futhi yenza abangani abaningi abasha ngomsebenzi ofanayo wokudlala ama-waswolves. Abadlali bazoxhuma futhi baqale umdlalo ndawonye nge-facebook. Ngaphandle kwalokho, abadlali bangakwazi futhi ukumisa amaqembu ezingxoxo, baxoxe, babelane ngamasu.
Isinyathelo 1: Ungena kuFacebook useshe igama elingukhiye elithi “WEREWOLF” noma “Werewolf Online”. Ngalesi sikhathi, i-Facebook izobuyisela imiphumela eminingi yeqembu le-Werewolf eku-inthanethi ukuze ujoyine.
Isinyathelo sesi-2: Udinga nje ukukhetha ukulandela imisebenzi yeqembu futhi ubeke amazwana kokuthunyelwe ukuze uthole abadlali ku-inthanethi. Lapha, umuntu ngamunye uzofakwa izinombolo futhi ahlukaniswe ngomsebenzi. Ngemuva kwabantu abanele, umdlalo uzoqhubeka njengokujwayelekile.
3. Dlala kuhlelo lokusebenza i-Wolvesville – Werewolf (Mahhala – CH Play kanye ne-App Store)
Ungalanda uhlelo lokusebenza lwe-Werewolf Online kudivayisi yakho ukuze ujabulele umdlalo. Le nguqulo ivumela abadlali abangu-16 ukuthi badlale ndawonye. Impi ngayinye izohlukana ibe amaqembu amaningi ahlukene futhi wonke umlingiswa ulwela ukusinda. Ngesikhathi esifanayo, udinga ukusebenzisa amakhono akho ukuze ukholise abanye.
Ukudlala i-Werewolf Online kukuvumela ukuthi uxhumane nabangane abaningi abavela kuwo wonke umhlaba, kungathumela amakhomishini kubadlali obathandayo. Ungakwazi ngisho nokujoyina umdlalo ngerenki.
Isinyathelo 1: Ngemva kokulanda uhlelo lokusebenza lwe-Werewolf Online. Uvula igeyimu bese ukhetha ukuvumelana nemibandela yomdlalo.
Isinyathelo sesi-2: Ngena ngemvume ngokukhetha i-akhawunti engu-1 kwangu-3 i-Facebook, Google, Email.
Isinyathelo sesi-3: Khetha ukuvumelana nemigomo yegeyimu futhi bese ucindezela inkinobho ethi Dlala. Ngaphezu kwalokho, uma ufuna ukufunda okwengeziwe ngalo mdlalo, ungachofoza uphawu lombuzo olungakwesokudla, ngaphansi kwesikrini.
Ngokuqondene nohlelo lokusebenza lwe-Werewolf Online, unokukhetha ukudlala ku-PC/MAC kanye neselula (i-Android ne-iOS). Umdlalo werewolf online PC kanye ne-MAC kuletha izinzuzo zesikrini esikhulu, esibukhali, okwandisa umuzwa wedrama futhi sinikeze umuzwa ojabulisa kakhulu futhi okhangayo. Ngaleso sikhathi, ukudlala imidlalo ocingweni kuletha induduzo, ukubumbana kanye nokuba lula. Udinga nje ukulala embhedeni futhi ube ne-smartphone enoxhumano lwenethiwekhi oluzinzile ukuze ukwazi ukudlala.
4. Uhlelo lokusebenza lwe-Werewolf Voice – I-Werewolf Online (Mahhala – CH Dlala)
Ngokufanayo nesicelo se-Wolvesville – Werewolf, i-App Werewolf Voice – i-Werewolf Online iyisicelo samahhala se-werewolf eku-inthanethi kumafoni athole ukukala kwezinkanyezi ezingu-4.9/5. Uzoshintsha ube yizindima zikaCupid, isakhamuzi, impisi, … ulungele ukulwa ngezwi ukuze uthole impisi icashile. Khethani umuntu oyedwa enizombulala njalo ebusuku, nixoxisane ukuze nithole isigebengu, nisole ukukopelana. Ingabe uzoyithola impisi? Zama ukuyilanda futhi ujabulele nabangani bakho.
5. Uhlelo lokusebenza lokudlala i-Werewolf online – I-Werewolf (Mahhala – CH Dlala)
I-Werewolf iyi-App yokudlala ama-waswolves ku-inthanethi ocingweni oluthandwa yintsha eningi. Njenge-motif efanele, uzoguqulwa ube ngabalingiswa futhi usebenzise ukucabanga nengxoxo ukuze uthole izimpisi eziqamba amanga zicashile. Akugcini lapho, lolu hlelo lokusebenza luhlanganisa neminye imisebenzi eminingi ethokozisayo yokuzijabulisa kwakho: ukuphola, ukuxoxa kanye nokwenza abangani.
6. I-Werewolf Voice – I-Ultimate Werewolf Party (Yamahhala)
I-Werewolf Voice – I-Ultimate Werewolf Party iwumdlalo wamahhala we-waswolf otholakala ku-inthanethi ongawudlala nabangani noma uhlangane nabanye abantu abaningi emhlabeni jikelele. Ukuqala umdlalo uzoba nabadlali abayi-12, uzosebenzisa izwi lakho ukwenza abantu bakholwe.
Uzothola ithuba lokulingisa abalingisi abahlukile ukuze uthole izimpisi ezicashile ngaphambi kokuba zibulale izakhamuzi. Ungakhohlwa ukusebenzisa amakhono akho ezwi, amakhono okuxhumana nabantu, ukucabanga kwamasu, ukudlala kweqembu futhi uwine.
7. Umdlalo we-PC we-Werewolf ku-inthanethi – Agrou (Mahhala)
I-Werewolf game online PC – I-Agrou iwuchungechunge lomdlalo webhodi eku-inthanethi ongeke neze waziba. Umdlalo uzoqala ngokuthi abadlali babuthane emlilweni. Udinga ukusebenzisa ubuhlakani nokuzwela kanye namaqhinga ukubona izimpisi ezicashe endaweni. Yize izithombe zingenemibala, okuqukethwe kwegeyimu nokuhlelwa kwesimo kuzokukwenza uhehe.
Ngenhla indlela yokudlala I-Werewolf PC eku-inthanethi ezikhangayo esifuna ukwabelana nawe ngazo. Ungalindi, mema abangani bakho ukuze bazozizwela igeyimu ye-inthanethi yakudala, ethokozisayo khona kanye ekhaya.
Uma ufuna ukuthola izeluleko ezengeziwe mayelana nelayini yefoni yeLaptop, PC, kanye ne-Werewolf etholakalayo njengamanje kwa-Nguyen Kim, sicela usithinte ngokushesha ngokusebenzisa iziteshi ezilandelayo ukuze uthole ukwesekwa okusheshayo:
Imibuzo evame ukubuzwa lapho udlala ama-waswolves online
Ingabe zikhona izinhlelo zokusebenza, izinhlelo zokusebenza zokudlala ama-waswolves online ocingweni lwakho ekhaya?
Sawubona bangane, izinhlelo zokusebenza i-Wolvesville – i-Werewolf, i-Werewolf Voice – i-Werewolf Online ziyizinhlelo zokusebenza ezidlala ama-waswolves ku-inthanethi kumafoni akhethwa iningi lenu. Noma ungaya ku-CH Play noma i-App Store, bhala igama elingukhiye elithi Werewolf, kuzoba nezinye izinhlelo zokusebenza ze-Werewolf Play eziningi ozozizwa.
I-Werewolf imidlalo eku-inthanethi ku-PC, iyiphi ikhompyutha enhle?
Sawubona, ungalanda imidlalo ye-waswolf ku-inthanethi kuwebhu, i-PC i-Agrou, i-Werewolf Voice – I-Ultimate Werewolf Party,…
Xem Thêm Điện thoại Xiaomi Redmi Note 9s | Muasalebang
Một số điểm thay đổi mới | Muasalebang